MUSICHALL APPLICATION: Sady manandratra zava-kanto malagasy no mampidi-bola ny mpanakanto Malagasy - Journal Madagascar
MUSICHALL APPLICATION: Sady manandratra zava-kanto malagasy no mampidi-bola ny mpanakanto Malagasy
Vahaolana amin’ny “pirate”. Anisany manampy amin’ny fidiram-bolan’ny mpanakanto ny fampiasana ny teknolojia toy ny tambazotra vahiny (ohatra: You Tube). Betsaka ny mpanakanto Malagasy tsy afaka misitraka izany satria mananosarotra ny fepetra takiana. Ho fanampiana azy ireo, ho fanomezana hasina ny mpanakanto Malagasy, ho fanandratana ny talenta malagasy eto an-toerana sy any ivelany, ho fanomezana tohana ny vita malagasy no namoronana ny Musichall Application atao amin’ny finday. Amin’ny alalan’ny “Google Play store” no ampidirana azy ao amin’ny finday. Nampahafantarana tamin’ny fomba ofisialy ny 5 martsa 2021 teny Ankorahotra ity vokatra vaovao noketrehan’ny Musichall SARL ity. Manomboka izao dia azo jifaina ao anatin’io “application” io ny zava-kanto malagasy toy ny hira, angano, tantara, tononkalo. Mpanakanto 160 eo no efa nisoratra anarana hampiditra ny sangan’asany ao anatin’ity application ity. Nambaran’ny Filoha tale jeneralin’ny Musichall SARL, Rakotomahefa Rado fa mitaky vola ny famokarana ny sangan’asa. Olana anefa ny “pirate”. Lasa mirona any amin’ny fampahafantarana ny sangan’asa amin’ny tambazotran-tserasera sosialy ireo mpanakanto.
Vahaolana ho azy ireo Musichall Application satria tombontsoa ara-bola ho azy izany isaky misy mihaino ny sangan’asany. Ho an’ny mpanjifa dia mizara roa fahafahana manaraka ireo mpanakanto ao anatin’ny Musichall Application: misy ny tolotra maimaim-poana fa voafetra ny zava-kanto azo arahina; misy ihany koa ny tolotra andoavam-bola ka 55.000 Ariary ny abonnement telovolana, 174.000 Ariary iray taona. Raha ho an’ny mpanakanto dia 5 Ariary isaky misy mihaino ny sangan’asany no azony raha tolotra andoavam-bola ary 2 Ariary raha tolotra maimaimpoana. Nilaza Rakotomahefa Rado fa 3 Ariary isaky misy mijery na mihaino no vola azon’ny mpanakanto raha Youtube. 40.000 Ariary isan-taona ny fandraisana anjara ho an’ny mpanakanto raha hisoratra anarana. Ankoatra izany, “ho fiarovana ny sangan’asan’ny mpanakanto, hampihenana ny pirate” ihany koa ity application ity satria tsy afaka “télécharger”-na ireo vokatra ao.